Xasan Shiikh oo caawa ay dhamaaday Muddo Xileedkii dastuuriga ahaa (Maxaa lagu xusuusan doonaa..?!) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Caawa oo kale 10-kii September sanadkii 2012 ayey aheyd markii Prof. Xasan Shiikh Maxamuud loo doortay inuu ku fariisto kursiga ugu sareeya Qaranka Soomaaliya.
Dhamaadka afartii sano ee dastuurku fasaxayey ayaa caawa ku eg iyadoo wixii ka dambeeya 12:00-ka saqda dhexe uu noqonayo sii hayaha xilka Madaxweynaha Somalia, wuxuu sii joogi doonaa xafiiska tan iyo inta laga gaarayo 30-ka October oo lagu madlan yahay inay dalka ka dhacdo doorashadii Madaxweynihii bedeli lahaa ee Soomaaliya, waaba haddii aan afar sano kale dib loo dooran.
Xasan Shiikh oo xilka xiligaas loo doortay uu lama filaan ku noqday dad badan oo Soomaali ah maadaama uu siyaasada ku cusbaa, siyaasiyiin ka mug weyna uu la tartamayey ayaa wareegii ugu dambeeyey ee doorashada kaga guuleystay Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo ahaa madaxweynihii isaga ka horeeyey ee hogaaminyey dowladii ugu dambeysay ee KMG aheyd.
Doorashada ka hor Xasan Shiikh aad looma aqoonin, wuxuuna ku dhex jiray howlaha waxbarashada iyo Ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed.
Dadka taageera Xasan Shiikh waxay sheegeen in Muddadii uu Madaxweyne ka ahaa dalka uu ku guuleystey dhanka arrimaha Dibadda, xoojinta iyo isku haynta hay’adaha dawladda, baahinta Federaalka dalka iyo dhisida maamul goboleedyada, maalgashiga qurba joogta Soomaaliyeed qaarkood, u hiilinta qaxootiga dibadda ku sugan, iyo qodobo kale.
Hase ahaatee dadka dhaliila wax-qabadkiisa waxay ku eedeeyaan inuusan wax la taaban karo ka qabanin amni xumida, horumar la’aanta, musuq-maasuqa faraha ka baxay, fadhiidnimo maamul, gaarsiin la’aanta wadanka doorasho qof iyo cod ah, kuna caan baxay safaro dibadeed oo intooda badan aan macno badan laheyn.
Xasan Shiikh oo ku caan baxay dhoolacadeyn inta badan joogto ah ayaa lagu eedeeynayey muddo xileedkiisa iska fogeeyey talooyinka qeybaha bulshada, ayna dhegtiisu u dalooshay oo kaliya koox yar oo ku xeyn daaban, kuwaasoo talooyinkooda aysan ka marneyn iney ku hoos wadeen danahooda qaaska ah.
Dadka Odorasa siyaasada Somalia ayaa aaminsan in Xasan Shiikh markii xilka loo dhaariyey uu ku deg degay balamo badan oo markii dambe ay ku adkaatay inuu fuliyo, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen inaan mar dambe la maqli doonin Madaxweyne iyo raisul wasaare is heysta, balse taas ma dhicin 3 raisul wasaare ayuuna magacaabay mudadii uu xafiiska joogay taasoo dadka qaarkood ku tilmaameen iney muuineyso aqoon darada ka heysatay siyaasada.
Ka sokow amniga waxyaabaha kale ee Madaxweynuhu sida weyn uga gaabiyey waxaa ka mid ahaa dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka mid ahaa balan-qaadyadiisii ugu waaweynaa, afar sano ka dib weli ciidanku ma heystaan qalab iyo mushahar joogto ah.
Su’aalaha dad badan isweydiinayaan waxaa ka mid ah Madaxweyne Xasan Shiikh oo mar kale doonaya inuu afar sano kale sii fadhiyo kursiga ma loo darsan doonaa? mise waa laga reysan doonaa? haddii uu soo laaban waayo, hadiise dib loo doorto muxuu soo kordhin karaa maadaama waxa uu galo iyo waxa uu gudo horey loo soo arkay